Back You are here: Home स्थानीय समाचार स्थानीय समाचार
ब्राम्हण समाज चितवनको बैठक
भरतपुर, २६ भदौ । ब्राम्हण समाज चितवनको पूर्ण बैठक बुधबार सम्पन्न भयो । समाजका जिल्ला अध्यक्ष काशिराम पौडेलको अध्यक्षतामा बैठक सम्पन्न भएको थियो ।
बैठकले ब्राम्हणहरुका हकहित र अधिकारका अलावा आगामी संविधानसभामा ब्राम्हण र समग्र आर्य–खस जातिको हितको लागि आर्य–खसलाई नेपालको मूल आदिवासीमा सूचिकृत गराउनु पर्ने, नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउनुपर्ने र जातीय राज्य र जातीय आरक्षणको खारेजी गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो ।
बैठकमा १००८ स्वामी भागवताचार्य माहाराज, ब्राम्हण समाजका सहअध्यक्ष एवम्
राष्ट्रिय स्वाभिमान पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद संग्रौला, समाजका केन्द्रीय सदस्य रमानन्द न्यौपाने, राष्ट्रिय स्वाभिमान पार्टीका केन्द्रीय सचिव ध्रुबराज मिश्र, ब्राम्हण समाजका केन्द्रीय सदस्य ध्रुबराज अर्याललगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।
मानवअधिकार अनुगमन तालिम सुरु
चितवन, २६ भदौ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय काठमाडौँको आयोजनमा बुधबारदेखि भरतपुरमा तीन दिने ‘मानवअधिकार अनुगमन तालिम’ सुरु भएको छ । तालिममा मध्यमाञ्चल र पूर्वाञ्चलका सवै र पश्मिाञ्चलका चार जिल्लाका ईन्सेक जिल्ला प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको छ ।
तालिमको उद्घाटन सत्रमा इन्सेक मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालयका संयोजक कृष्ण गौतम, इन्सेक पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय संयोजक सोम थापा, इन्सेक अनलाइनका गणेश भण्डारी, मानवअधिकार शिक्षा कार्यक्रमका प्रमुख सुशील चौधरीले तालिममा सहभागीहरुलाई सहजिकरण गर्ने बताइएको छ ।
कार्यक्रममा निर्वाचन आचरसंहिता, कार्यान्वयनको प्रकृया र मतदाता शिक्षा सम्बन्धमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, मकवानपुरका प्रमुख ध्रुवकुमार भण्डारीले सहभागीहरुबीच सहजिकरण गरेका थिए ।
कार्यक्रमको उद्घाटन सत्र इन्सेक मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय संयोजक कृष्ण गौतमको अध्यक्षतामा भएको थियो । कार्यक्रममा इन्सेक चितवनका संयोजक मुकुन्द दहाल लगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।
प्राथमिक उपचारका सामाग्री वितरण
मुग्लिन, २६ भदौ । पहाडी गाविसका छ वटा विद्यालयलाई प्राथमिक उपचारका सामाग्री वितरण गरिएको छ । प्राथमिक उपचार दिवसको अवसरमा बुधबार भरतपुर सामुदायिक अस्पतालले उक्त सामाग्री वितरण गरेको डा. भोजराज अधिकारीले बताए ।
अस्पतालले कविलास गाविसका राप्रावि भतेरी (जलदेवी), भार्लाङ र फेवाटार, त्यस्तै चण्डीभञ्ज्याङ गाविसको पैरेनी राप्रावि र दारेचोक गाविसको राप्रावि लेवाटार र सर्वशान्ति उच्चमावि कुरिनटारलाई उक्त सामग्री वितरण गरेको हो ।
उक्त अवसरमा प्राथमिक उपचारका बारेमा अन्तरक्रिया समेत भएको थियो । कार्यक्रममा भरतपुर सामुदायिक अस्पतालका डा. भोजराज अधिकारी, व्यवस्थापकीय निर्देशक विष्णु शर्मा, कार्यक्रम संयोजक महेन्द्र सिग्देललगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।
गँैडाकोटमा नयाँ आइटी कलेज
नारायणगढ, २६ भदौ । लुम्बिनी आइसिटी कलेज गैँडाकोटले शैक्षिक सत्र २०७०÷७१ का लागि बिएस्सी, सिएसआइटी कोर्षको शिक्षा प्रदान गर्ने भएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी बिएस्सी सिएसआइटी कोर्ष पढाउने लुम्बिनी आइसिटी कलेज नवलपरासीकै पहिलो कलेज बनेको छ । ३६ जना विद्यार्थीलाई अध्यापन गराउने मान्यता लुम्बिनीले प्राप्त गरेको कलेजका निर्देशक निर्मल पाण्डेले जानकारी दिए । प्लस टु वा आइएस्सी उत्तीर्ण गरी ४५ प्रतिशत अंक ल्याएका विद्यार्थीहरुले यो स्नातक तहको कोर्ष अध्ययन गर्न पाउनेछन् ।
स्मार्ट मल्टीमिडिया, एसीसहित कक्षा कोठाको ब्यवस्था, सुविधा सम्पन्न भौतिक पुर्वाधारमा विद्यार्थीहरुलाई अध्यापन गराइने निर्देशक पाण्डेले जानकारी दिए ।
यसैबीच, लुम्बिनी आइसिटी कलेजको आयोजनामा बिएस्सी सिएसआइटिबारे एकदिने सेमिनार बुधबार नारायणगढमा सम्पन्न भएको छ । सेमिनारमा आइटी विशेषज्ञ प्रकाश पौडेलले यसको महत्वबारे विद्यार्थीलाई जानकारी गराएका थिए । नेपालमा ४० वटा कलेजले यो कोर्ष अध्यापन गराउँदै आएका छन् । राजधानीमा मात्र २५ वटा कलेज छन् भने, बाँकी कलेज मोफसलमा छन् । नेपालमा २०६४ सालदेखि यो कोर्ष तयार गरी अध्यापन सुरु गरिएको हो । अहिलेसम्म करीब ४ सय जनाले यो कोर्ष पूरा गरिसकेका छन् ।
नारायणगढ, २६ भदौ । डिप्लोमा ईन्जिनियरीङ् तेस्रो वर्ष दोस्रो समुहको परीक्षामा प्रहरी परिचालन गरेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित बनेका छन् ।
परीक्षा सञ्चालन भईरहेको समयमा परीक्षा हलभित्र प्रहरी परिचालन गरेको भन्दै सहभागी विद्यार्थीहरुले परीक्षा केन्द्र स्कुल अफ हेल्थ साईन्सेजको प्रशासनिक भवन अगाडि धर्ना दिएका हुन् । विद्यार्थीहरुले परीक्षा हाताभित्र प्रहरी परिचालन गरेर परीक्षाको वातावारण धमिलाएको आरोप लगाएका छन् ।
क्याम्पस प्रशासनले भने विद्यार्थीले परीक्षालाई अमर्यादित बनाएपछि आफूहरुले कारवाही गरेको बताएको छ । अहिले सो केन्द्रमा डिप्लोमा ईन्जिनियरिङ् तेस्रो वर्ष समुहका ४० जना विद्यार्थीहरु परीक्षामा सहभागी रहेका छन् ।
रत्ननगर, २६ भदौ । पूर्वी चितवनको पदमपुर–८ सिमलबस्तीमा रहेको जनहित राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयले विद्यालयको भवन निर्माणमा सहयोग गर्ने सहयोगीहरुलाई बुधबार सम्मान गरेको छ ।
विद्यालयको भवन, शौचालय र गाँउमा खानेपानीको व्यवस्था गरिदिने वालकल्याण संस्था र सहयोगी दाता नेदरल्याण्डकी नागरिक नेलेका एल्डर्सलाई प्रमाणपत्र र दोसल्लाले सम्मान गरिएको हो । कार्यक्रम विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पदमबहादुर तामाङको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो ।
सो विद्यालयको ६ कोठे भवन, शौचालय र खानेपानी एवम् सो विद्यालयको सेवा क्षेत्रको बस्तीमा विकास निर्माणमा नेदरल्याण्डकी नागरिक नेलेका एल्डर्सले करिव ५० लाख रुपैयाँ र बालकल्याण संस्थाले करिब ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको बालकल्याण संस्थाका पूर्वअध्यक्ष केशव खनालले जानकारी दिए ।
सीसीटीभी जडान गरिने
नारायणगढ, २६ भदौ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले सीसीटीभी जडान गर्ने भएको छ ।
गृह मन्त्रालयको एक लाख ५० हजार रुपैंयाको आर्थिक सहयोगमा कार्यालयले सीसीटीभी जडान गर्न लागेको हो । आफ्नै कर्मचारी तथा सेवाग्राहीलाई प्रत्यÔ रुपमा निगरानीमा राख्न सीसीटीभी जडान गर्न लागिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेन्द्रराज शर्माले बताए ।
सीसीटीभी नागरिकता फा“ट, राहदानीलगायतका मुख्य फा“टहरु एवम् मुलगेट र कार्यालय परिसरमा जडान गरिने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा यसरी सीसीटीभी जोड्न लागिएको यो पहिलो हो । यसअघि आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरमा सीसीटीभी जोड्ने भनिएपनि प्रकृया अघि बढेको छैन ।
नारायणगढ, २६ भदौ । एटीच्युड मल्टिलर्निङ एकेडेमी खैरहनीले दोस्रो वार्षिक उत्सवको अवसरमा बुधबार साहित्यिक व्यक्तिलाई सम्मान गरेको छ ।
कार्यक्रममा साहित्यकार केशवराज आमोदी, पुष्प अधिकारी, गिरिधारी विशिष्ठ, रुद्रराज कँडेललगायतलाई दोसल्ला ओढाई सम्मान गरिएको हो । कार्यक्रम साहित्यकार इन्द्र रेग्मीको प्रमुख आतिथ्यमा भएको थियो ।
नारायणगढ, २६ भदौ । अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिको विरोध गरेको छ । क्रान्तिकारीका जिल्ला संयोजक दयाराम पौडेलले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा चर्को मूल्यवृद्धिको मारमा थप मूल्यवृद्धि गरेर जनतालाई मार परेकोले मूल्यवृद्धि तुरुन्त फिर्ता गर्न माग गरिएको छ ।